भगवान - एक परिचय - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
भगवान > ईश्वर पिता > भगवान - एक परिचय
हाम्रो लागि इसाईको रूपमा, सबैभन्दा आधारभूत विश्वास भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। "भगवान" द्वारा - कुनै लेख बिना, थप थप बिना - हामी बाइबलको ईश्वरलाई बुझ्छौं। एक राम्रो र शक्तिशाली आत्मा हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, जसले हाम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ, जसले हाम्रो कार्यहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा र हाम्रो जीवनमा कार्य गर्दछ र हामीलाई उहाँको भलाईको साथ सदाको लागि प्रस्ताव गर्दछ। ईश्वर आफ्नो समग्रमा व्यक्तिले बुझ्न सक्दैन। तर हामी सुरू गर्न सक्दछौं: हामी परमेश्वरको ज्ञानको निर्माण ब्लकहरू स can्कलन गर्न सक्दछौं जसले हामीलाई उहाँको चित्रको मुख्य विशेषताहरू पहिचान गर्न दिनुहोस् र परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको लागि हामीलाई राम्रो शुरुवात गर्न दिनुहोस्। हामी परमेश्वरका गुणहरू हेरौं जुन एक नयाँ विश्वासी, उदाहरणका लागि, विशेष गरी सहयोगी हुन सक्छ।
धेरै मानिसहरु, लामो समय सम्म विश्वास गर्नेहरु सहित, भगवान को अस्तित्व को प्रमाण चाहन्छन्। तर भगवानको कुनै प्रमाण छैन कि सबैलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। यो सम्भवतः प्रमाण भन्दा परिस्थितिजन्य प्रमाण को कुरा गर्न को लागी राम्रो छ। प्रमाणले हामीलाई निश्चितता दिन्छ कि भगवान हुनुहुन्छ र उहाँको सार बाइबल उहाँको बारेमा के भन्छ अनुरूप छ। भगवान "आफैंलाई साक्षी बिना छोड्नुभएन", पावलले लिस्त्रामा अन्यजातिहरुलाई घोषणा गरे (प्रेरित १४:१)। आत्म गवाही - यो के मिल्छ?
सिर्जना : भजन १:: १ भन्छ: «स्वर्गले परमेश्वरको महिमा बताउँछ ... Romans रोमी १:२० मा यसले भन्छ:
नियमित: निर्माणले शारीरिक नियमहरूको, अर्डरको स shows्केत देखाउँदछ। यदि पदार्थको केही आधारभूत गुणहरू थोरै फरक थिए भने, यदि पृथ्वीको अस्तित्व थिएन भने, मानवहरू अवस्थित हुन सक्दैनन्। यदि पृथ्वीसँग फरक आकार वा फरक कक्षा थियो भने, हाम्रो ग्रहमा सर्तहरूले मानव जीवनलाई अनुमति दिँदैन। कसै-कसैले यसलाई एक ब्रह्माण्डिक संयोग ठान्छन्; अरूहरू यसलाई व्याख्या गर्न अझ बढी उचित ठान्छन् कि सौर्यमण्डल एक बुद्धिमान सर्जकले योजना गरेका थिए।
जीवन: जीवन अविश्वसनीय जटिल रसायनिक कच्चा माल र प्रतिक्रियाहरूमा आधारित छ। कसै-कसैको विचारमा जीवनलाई “बौद्धिक कारणले” हुन्छ; अरूहरू यसलाई संयोग ठान्छन्। कसै-कसैले विश्वास गर्छन् कि विज्ञानले एक दिन "परमेश्वरबिना" जीवनको उत्पत्ति प्रमाणित गर्दछ। धेरै व्यक्तिको लागि भने जीवनको अस्तित्व सृष्टिकर्ता ईश्वरको स .्केत हो।
पुरुष: मानिससँग आत्म-चिन्तन छ। उसले ब्रह्माण्डको अन्वेषण गर्दछ, जीवनको अर्थको बारेमा सोच्छ, सामान्यतया अर्थ खोजी गर्न सक्षम हुन्छ। शारीरिक भोकले खानाको अस्तित्वलाई जनाउँछ; तिर्खाले सुझाव दिन्छ कि त्यहाँ त्यस्तो चीज छ जुन तिर्खा मेट्न सक्छ। अर्थको लागि हाम्रो आध्यात्मिक चाहनाले अर्थ वास्तवमा अवस्थित छ र फेला पार्न सकिन्छ भन्ने स suggest्केत दिन्छ? धेरै मानिसहरूले परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अर्थ पाएको दाबी गर्छन्।
नैतिकता [नैतिकता]: के सहि र गलत गलत राय मात्र हो वा बहुमतको प्रश्न हो, वा त्यहाँ कुनै मानिस भन्दा माथि एक अधिकार छ कि राम्रो र नराम्रो मान्दछ? यदि त्यहाँ ईश्वर छैन भने, मानिससँग कुनै कुरालाई खराब भन्नुको कुनै आधार छैन, जातिवाद, नरसंहार, यातना र यस्तै अत्याचारको निन्दा गर्ने कुनै कारण छैन। दुष्टको अस्तित्व एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर संकेत छ। यदि यो अवस्थित छैन भने, शुद्ध शक्तिले शासन गर्नुपर्दछ। कारणहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको कारण हो।
भगवान को अस्तित्व फिर्ता पछाडि जान्छ र आयाम र पदार्थ को गुणहरु उसलाई लागू हुँदैन। यो माईल र किलोवाट मा मापन गर्न सकिदैन। सुलेमान मान्छन् कि उच्चतम स्वर्गले पनि भगवानलाई बुझ्न सक्दैन (१ राजा ::२))। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वी भर्नुहुन्छ (यर्मिया २३:२४); यो सर्वत्र छ, यो सर्वव्यापी छ। त्यहाँ ब्रह्माण्डमा कुनै ठाउँ छैन जहाँ यो अवस्थित छैन।
भगवानको रचनात्मकता मा एक बुद्धि छ कि हाम्रो समझ भन्दा बाहिर छ। उहाँ ब्रह्माण्डमा शासन गर्नुहुन्छ र यसको निरन्तर अस्तित्व प्रत्येक सेकेन्ड सुनिश्चित गर्नुहुन्छ (हिब्रू १: ३)। यसको मतलब उसलाई थाहा छ कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मा के चलिरहेको छ; उहाँको बुद्धि असीमित छ - उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। सबै कुरा उनी जान्न चाहन्छन्, चिन्न, अनुभव गर्न, जान्न, चिन्न, उनी अनुभव गर्दछन्।
परमेश्वरले सही र गलत परिभाषित गर्नुभएको हुनाले, उहाँ परिभाषा द्वारा सही हुनुहुन्छ र उहाँ सधैं सही के गर्ने शक्ति छ। "किनकि परमेश्वरलाई दुष्ट काम गर्न को लागी परीक्षा गर्न सकिदैन" (याकूब १:१३)। उहाँ बिल्कुल धर्मी र पूर्ण धर्मी हुनुहुन्छ (भजन ११:))। उहाँका मापदण्डहरु सही छन्, उहाँका निर्णयहरु सही छन्, र उनी धार्मिकता मा संसार को न्याय गर्छन्, किनकि उनी अनिवार्य रूप मा राम्रो र सही छन्।
एक चेलाले येशूलाई सोधे: "प्रभु, हामीलाई पिता देखाउनुहोस् ..." (यूहन्ना १४:))। उनी जान्न चाहन्थे कि भगवान कस्तो हुनुहुन्छ। उसलाई आगो र बादलको स्तम्भको सीनैमा आगो र बादलको कथा, इजकिएलले देखेको अलौकिक सिंहासन, एलियाले सुनेको गर्जनको बारेमा थाहा थियो (प्रस्थान ३: ४; १३:२१; १ राजा १:: १२; इजकिएल १) । ईश्वर यी सबै भौतिकीकरण मा देखा पर्न सक्छन्, तर उहाँ साँच्चै के जस्तो हुनुहुन्छ? हामी उहाँलाई कसरी कल्पना गर्न सक्छौं?
"जसले मलाई देख्छ पितालाई देख्नुहुन्छ", येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना १४:))। यदि हामी जान्न चाहन्छौं कि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, हामीले येशूलाई हेर्नु पर्छ। हामी प्रकृति बाट भगवान को ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं; कसरी पुरानो नियम मा उनी आफैंलाई प्रकट गर्दछ भगवान बाट थप ज्ञान; तर भगवान को धेरैजसो ज्ञान बाट आउँछ कि उसले कसरी येशू मा आफैलाई प्रकट गर्यो।
येशूले हामीलाई भगवान प्रकृतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाउनुहुन्छ। उहाँ इम्मानुएल हुनुहुन्छ, जसको अर्थ "परमेश्वर हामी संग हुनुहुन्छ" (मत्ती १:२३)। ऊ पाप बिना, स्वार्थ बिना बाँच्यो। करुणाले उसलाई घेरिएको छ। उहाँ माया र आनन्द, निराशा र क्रोध महसुस गर्नुहुन्छ। उहाँ व्यक्ति को ख्याल राख्नुहुन्छ। उहाँले धार्मिकताको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। उसले अरुको पीडा र बलिदान मृत्यु सम्म सेवा गर्यो।
भगवान पनि त्यस्तै हो। पहिले नै मोशा को लागी उनले आफैलाई निम्नानुसार वर्णन गरे: "प्रभु, प्रभु, भगवान, दयालु र दयालु र धैर्यवान र महान अनुग्रह र वफादारी को, जो हजारौं को अनुग्रह को रक्षा गर्दछ र अधर्म, अपराध र पाप क्षमा गर्दछ, तर कसैलाई सजाय नदिनुहोस् ... "(प्रस्थान ३४: -2-)।
ईश्वर जो सृष्टिको माथि हुनुहुन्छ सृष्टि भित्र काम गर्ने स्वतन्त्रता छ। यो उहाँको अटलता हो, उहाँ हामी संग हुनुहुन्थ्यो। जे होस् उहाँ ब्रह्माण्ड भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ र ब्रह्माण्डमा जताततै उपस्थित हुनुहुन्छ, उनी "हामी संग" एक तरीकाले छन् कि उनी "संग" अविश्वासी छैनन्। शक्तिशाली भगवान सधैं हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। उहाँ एकै समयमा नजिक र टाढा हुनुहुन्छ (यर्मिया २३:२३)।
येशू को माध्यम बाट उहाँले मानव इतिहास मा प्रवेश गर्नुभयो, अन्तरिक्ष र समय मा। उहाँले शारीरिक रूप मा काम गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई देखाउनुभयो कि शरीर मा जीवन आदर्श रूप मा कस्तो हुनुपर्छ, र उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ कि भगवान हाम्रो जीवन शारीरिक भन्दा माथि हुन चाहन्छ। अनन्त जीवन हामीलाई प्रस्ताव गरिएको छ, भौतिक सीमाहरु बाहिर जीवन हामी अब जान्दछौं। आत्मा-जीवन हामीलाई प्रस्ताव गरिएको छ: परमेश्वरको आत्मा आफैंमा आउनुहुन्छ, हामीमा बस्नुहुन्छ र हामीलाई भगवानका सन्तान बनाउनुहुन्छ (रोमी ::११; १ यूहन्ना ३: २)। भगवान सधैं हामी संग हुनुहुन्छ, अन्तरिक्ष र समय मा काम गर्न को लागी हामीलाई मद्दत गर्न।
परमेश्वरले हाम्रो लागि योजना बनाउनुभएको छ किनकि उहाँले हामीलाई उहाँको आफ्नै छविमा बनाउनुभयो (उत्पत्ति १:२))। उहाँ हामीलाई उहाँको अनुरूप हुन आग्रह गर्नुहुन्छ - दयामा, शक्तिमा होइन। येशूमा, भगवानले हामीलाई एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ कि हामी गर्न सक्छौं र अनुकरण गर्नुपर्छ: नम्रता, निस्वार्थ सेवा, प्रेम र करुणा, विश्वास र आशा को एक उदाहरण।
"भगवान प्रेम हुनुहुन्छ", जोन लेख्छन् (१ यूहन्ना ४:))। उहाँले येशूलाई हाम्रा पापहरु को लागी मर्न पठाएर हाम्रो लागी आफ्नो प्रेम प्रमाणित गर्नुभयो, ताकि हामी र भगवान को बीच बाधाहरु खस्न सक्छौं र हामी अन्त मा उहाँ संग अनन्त आनन्द मा बाँच्न सक्छौं। भगवानको प्रेम इच्छाशक्त सोच होइन - यो कार्य हो कि हामीलाई हाम्रो गहिरो आवश्यकताहरु मा मद्दत गर्दछ।
हाम्रो लागि भगवान को प्रेम, जो सबैभन्दा स्पष्ट रूप मा येशू ख्रीष्ट मा व्यक्त गरीएको छ, हाम्रो नमुना हो: «यो प्रेम हो: कि हामी भगवान लाई माया गर्दैनौं, तर उहाँले हामीलाई माया गर्नुभयो र हाम्रा पापहरु को प्रायश्चित गर्न को लागी आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो। प्रिय, यदि परमेश्वरले हामीलाई यति माया गर्नुभयो भने, हामी एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ "(१ यूहन्ना ४: १०-११)। यदि हामी माया मा बाँच्यौं भने, अनन्त जीवन हाम्रो लागी मात्र होइन तर हाम्रो वरपरकाहरु को लागी एक खुशी हुनेछ।
यदि हामी येशु लाई जीवन मा पछ्याउछौ भने, हामी उहाँलाई मृत्यु मा र पछि पुनरुत्थान मा पछ्याउनेछौं। एउटै परमेश्वर जसले येशूलाई मृत्युबाट बौरी उठाउनु भयो उहाँ पनि हामीलाई उठाउनुहुन्छ र हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ (रोमी ::११)। तर: यदि हामी माया गर्न सिकेनौं भने, हामी अनन्त जीवनको आनन्द उठाउन सक्दैनौं। यसैले भगवानले हामीलाई एक गति मा माया गर्न सिकाउनुहुन्छ जसको साथ हामी गति राख्न सक्छौं, एक आदर्श उदाहरण को माध्यम बाट कि उहाँ हाम्रो आँखा को सामु राख्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा को माध्यम बाट हाम्रो हृदय परिवर्तन गरीरहेको छ। सूर्य को परमाणु रिएक्टरहरु लाई शासन गर्ने शक्ति हाम्रो दिल मा मायालु काम गर्दछ, हामीलाई लुकाउँछ, हाम्रो स्नेह जीत, हाम्रो वफादारी जीत।
भगवानले हामीलाई जीवन, जीवन अभिविन्यास, अनन्त जीवन को लागी आशा मा अर्थ दिनुहुन्छ। हामी उसलाई भरोसा गर्न सक्छौं यदि हामी राम्रो गर्न को लागी कष्ट भोग्नु परेको छ। भगवानको भलाइको पछाडि उहाँको शक्ति छ; उनको प्रेम उनको बुद्धि द्वारा निर्देशित छ। ब्रह्माण्ड को सबै शक्तिहरु उहाँको आज्ञा मा छन् र उहाँले हाम्रो भलाई को लागी उनीहरुलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर हामी जान्दछौं कि सबै थोक भगवान लाई माया गर्नेहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो को लागी सेवा गर्दछ ... »(रोमी 8,28)।
हामी उहाँप्रति कृतज्ञताका साथ जवाफ दिन्छौं; उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। उनको मा
हाम्रो प्रेम संग भलाइ। हामी उसको सराहना गर्छौं, हामी उनको आराधना गर्छौं, हामी उहाँसंग आत्मसमर्पण गर्छौं जुन हामीसंग अझ बढी दिने थियो। जब त्यसले हामीलाई आफ्नो प्रेम देखाउँदछ, हामीले उसलाई परिवर्तन गरौं ताकि हामी वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रेम गरौं। हामीसँग हामीसँग भएको सबै थोक प्रयोग गर्दछौं
हामी के हौं, येशूको उदाहरण पछ्याई अरूको सेवा गर्न उसले हामीलाई दिने सब थोक।